လက်စတာအသင်းကို သရေကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာ မှန်သွားတဲ့ ဆြာလွဲရဲ့ နောက်ထပ် ခန့်မှန်းချက်ကတော့ ယူနိုက်တက် Vs ဝုဗ်…. – Premier League Special
လက်စတာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ (၁-၁)နဲ့ သရေကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဟာ ပွဲအပြီးမှာ (၂-၂)နဲ့ သရေကျခဲ့တာကြောင့် အပွဲပွဲလွဲခဲ့တဲ့ ဆြာရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ကို မယုံကြည့်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အံသြစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း အလွဲတွေများခဲ့တဲ့ဆြာလွဲက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(အင်္ဂါည ၂း၃၀)မှာ ကစားကြမယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့ဝုဗ်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲကိုလည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။
မိုက်ကယ်အိုဝင်က ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဝုဗ်အသင်းကို လက်ခံကစားရမယ့် ပွဲစဉ်မှာလည်း ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ( ၈ ) ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ မရှိသေးပဲ လက်ရှိမှာ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ( ၄ ) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ပြိုင်ဘက် ဝုဗ်အသင်းကတော့ ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်(၅)ပွဲလုံးမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းတစ်သင်းကိုသာ(၂-၁)နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲ(၃)ပွဲ၊ သရေ (၁)ပွဲသာရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ လီဗာပူးလ်၊ ဘန်လေတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် (၂)ပွဲရှိခဲ့ရာမှာလည်း (၂)ပွဲစလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့်ဟောင်း အိုဝင်က ဆိုးရှားရဲ့ အသင်းက (၁ – ဝ) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး ဝုဗ်အသင်းကို ဒီဇင်ဘာ ဒဏ်ရာတွေ ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိုဝင်က “ယူနိုက်တက်အသင်းသားတွေက အခုအချိန်မှာ ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝနေပါတယ်။ လိဒ်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရပြီး အိမ်ကွင်း ပုံစံကောင်းကို ပြသထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝုဒ်က တိုက်စစ် အားသန်ပေမယ့် ဂိုးရှေ့မှာ ရုန်းကန်ရလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝုဗ်အနေနဲ့ သရေ တစ်မှတ်ရရှိဖို့ ခံစစ် ဦးစားပေး ကစားသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဝုဗ်ခံစစ်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါလိမ့်မယ်။” လို့ BetVictor ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေကကော ဒီတစ်ခါမှာ အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ကြမှာလား….ဘယ်လိုထင်မြင်ကြလဲဆိုတာ သုံးသပ်ပေးကြပါအုံး….
လက္စတာအသင္းကို သေရက်မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့တာ မွန္သြားတဲ့ ၾဆာလြဲရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ခန႔္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ယူႏိုက္တက္ Vs ဝုဗ္….
လက္စတာအသင္းနဲ႔ပြဲစဥ္မွာ (၁-၁)နဲ႔ သေရက်သြားလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ခန႔္မွန္းခ်က္ထုတ္ခဲ့တဲ့ မိုက္ကယ္အိုဝင္ရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္ဟာ ပြဲအၿပီးမွာ (၂-၂)နဲ႔ သေရက်ခဲ့တာေၾကာင့္ အပြဲပြဲလြဲခဲ့တဲ့ ၾဆာရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္ကို မယုံၾကည့္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အံၾသစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ခါမွာလည္း အလြဲေတြမ်ားခဲ့တဲ့ၾဆာလြဲက ဗုဒၶဟူးေန႔(အဂၤါည ၂း၃၀)မွာ ကစားၾကမယ့္ ယူႏိုက္တက္နဲ႔ဝုဗ္အသင္းတို႔ရဲ႕ ပြဲကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါၿပီ။
မိုက္ကယ္အိုဝင္က ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ဝုဗ္အသင္းကို လက္ခံကစားရမယ့္ ပြဲစဥ္မွာလည္း ရႈံးပြဲမရွိ မွတ္တမ္းေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္ အေနနဲ႔ ေနာက္ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ( ၈ ) ပြဲဆက္ ရႈံးပြဲ မရွိေသးပဲ လက္ရွိမွာ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ( ၄ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ ဝုဗ္အသင္းကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလတစ္လလုံးမွာ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္(၅)ပြဲလုံးမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတစ္သင္းကိုသာ(၂-၁)နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရႈံးပြဲ(၃)ပြဲ၊ သေရ (၁)ပြဲသာရရွိထားတဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ မွာ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ လီဗာပူးလ္၊ ဘန္ေလတို႔နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ အေဝးကြင္း ပြဲစဥ္ (၂)ပြဲရွိခဲ့ရာမွာလည္း (၂)ပြဲစလုံးရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ အသင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လီဗာပူးနဲ႔ယူႏိုက္တက္အသင္းတို႔ရဲ႕ ၾကယ္ပြင့္ေဟာင္း အိုဝင္က ဆိုးရွားရဲ႕ အသင္းက (၁ – ဝ) ရလာဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရၿပီး ဝုဗ္အသင္းကို ဒီဇင္ဘာ ဒဏ္ရာေတြ ဆက္ေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အိုဝင္က “ယူႏိုက္တက္အသင္းသားေတြက အခုအခ်ိန္မွာ ယုံၾကည္မႈ ျပည့္ဝေနပါတယ္။ လိဒ္ကို ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရၿပီး အိမ္ကြင္း ပုံစံေကာင္းကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝုဒ္က တိုက္စစ္ အားသန္ေပမယ့္ ဂိုးေရွ႕မွာ ႐ုန္းကန္ရေလ့ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဝုဗ္အေနနဲ႔ သေရ တစ္မွတ္ရရွိဖို႔ ခံစစ္ ဦးစားေပး ကစားသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ဝုဗ္ခံစစ္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုပါလိမ့္မယ္။” လို႔ BetVictor ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကေကာ ဒီတစ္ခါမွာ အိုဝင္ရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြကိုယုံၾကည္ၾကမွာလား….ဘယ္လိုထင္ျမင္ၾကလဲဆိုတာ သုံးသပ္ေပးၾကပါအုံး….
လာမယ့်နွေရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ကို ပေါ့ဂ်ဘာစွန့်ခွာဖို့ ၁၀၀ % သေချာနေပြီတဲ့….